‘पिर’को ऐनामा प्रचण्ड र उनका अनुयायीको अनुहार | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेविसंघमा उमेर हदको तगारो
पक्ष–विपक्ष हुन सक्छ, गीतलाई सहज रुपमा हेर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल →
‘पिर’को ऐनामा प्रचण्ड र उनका अनुयायीको अनुहार
Posted on 13/03/2022 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रकाश सपूतको ‘पिर’ गीतको कभर फोटोमा लेखिएको शब्द देख्ने बित्तिकै दिमागमा आउने अर्को शब्द हो ‘वीर’ । खासमा त्यो फोटोले ‘वीर’ र ‘पिर’ दुवैको कथा भन्छ । यसले परिवर्तनका लागि योगदान गरेका भुइँतहका नेपाली युवा युवतीको विगतलाई सम्मान गरेको छ । साथसाथै उक्त गीतको कथाले उनीहरूले भोग्नुपरेको वर्तमानको पीडाप्रति सहनुभूति प्रकट गरेको छ । गीतमा निराशा छ, पीडा छ, चित्कार छ । तर, पीडा, कुण्ठा, निराशा र चित्कार व्यक्त गर्न पनि आँट चाहिन्छ- शक्तिशालीका विरुद्ध जाने आँट । पीडा, कुण्ठा र निराशा शक्तिशालीले शक्तिहीनमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारका प्रमाण हुन् । शक्तिशालीहरूले आफूले गरेको अन्याय र अत्याचारको प्रमाण मेटाउन पीडा, कुण्ठा र निराशाजस्ता शब्दलाई नकारात्मक अर्थ दिने गर्छन् ।
शक्तिशालीहरूको भाष्यमा अत्याचार र अन्याय गरिरहने उनीहरू आफू सकारात्मकताका चरमचुली हुन् । अन्यायका विरूद्ध कुण्ठा, पीडा र निराशा व्यक्त गर्नेहरू नकारात्मकताका नरककुण्ड हुन् । आज जसले प्रकाश सपूतको ‘पिर’ गीतको पक्षमा उभिनेलाई कुण्ठित र निराश भनेका छन्, उनीहरू माओवादी नेताहरूले नेपाली युवासित गरेको झूटको खेती, विश्वासघात र धोकाको प्रमाण मेटाउन चाहन्छन् । हिजोका वीरहरूको आजको ‘पिर’ नेपाली इतिहासमा युवाहरूमाथि माओवादी नेतृत्वले गरेको गद्दारीको प्रमाण हो । प्रकाश सपूतको यो गीतमा नेपालको माओवादी नेताहरूको अनुहार निकै घिनलाग्दो देखिन्छ । आफ्नो विद्रुप अनुहार देखेपछि माओवादी नेताहरू आतङ्कित भएका छन् र आफ्ना विवेकहीन कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाश सपूतका विरुद्ध उतारेका छन् ।
प्रचण्ड मार्काका माओवादी नेताहरू र माओवादी विरोधीहरूको व्यवहारमा एउटा समानता छ । त्यो समानता भनेको के हो भने पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरूको ‘पिर’ वा पीडाले यी दुवै थरीलाई कत्ति पनि दुख्दैन । यिनीहरू दुवैथरी नै सम्भ्रान्तहरू हुन् । हेर्नुस् न आज कसरी सत्तामा बसेर सहभोज गरिरहेका छन्? माओवादीका सम्भ्रान्त र माओवादी विरोधी सम्भ्रान्तहरूका सन्तानहरू कोही बेलायत छन् र कोही अमेरिका । उनीहरू कसैका सन्तान पनि खाडीको गर्मीको भुङ्ग्रोमा उसिल्टिनु परेको छैन । उनीहरू कसैका सन्तानको पनि युद्धका बम र गोलीले शरीर ‘कुरूप’ बनाएको छैन । त्यसकारण, सपना लुटिएर खाडीमा बेचिन बाध्य युवाहरूको ‘पिर’ले उनीहरूलाई पोल्दैन ।
माओवादी र माओवादी विरोधी नवधनाढ्यहरूको विचारमा गीतहरूमा युद्धका घाउ देखाउनु अपराध हो । किनकि, ती घाउहरू उनीहरूले विगतमा राज्य र विद्रोही पक्षको नेतृत्वमा बसेर मच्चाएको हिंसाका प्रमाण हुन् । ती घाउहरू प्रचण्ड र उनका अनुयायीका वैभव निर्माण गर्ने घाउहरू हुन् । ती घाउहरूले नेपालका माओवादी नवधनाढ्यहरूको महल कसरी आम ‘वीर’ योद्धाहरूको रगत, हाड र मासुले बनेको छ भन्ने उजागर गर्छन् । ती महलहरूले आज ती ‘वीर’हरूलाई कति धेरै पिर दिएको छ भन्ने पनि गीतले उजागर गरेको छ । त्यसकारण, हिजोका ‘वीर’हरूको आजको पिर र हिजोदेखिको घाउ उजागर गर्ने गीतका कारण खुमलटारमा खैलाबैला छ । शायद बालुवाटारमा पनि कतै न कतै लज्जाबोध भइरहेको छ ।
प्रचण्डका अनुयायीहरूले गीतमा रहेको एउटा दृश्यलाई लिएर माओवादी महिला छापामारको अपमान गरेको भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । उनीहरूले त्यसो भनिरहँदा आफ्नो पूर्वसहकर्मी महिला साथी भन्ने चिनेपछि मूल पुरुष पात्र यौनसम्बन्ध नगरी तुरुन्तै फर्किएको तथ्य लुकाएका छन् । गीतले अहिले पनि जतिसुकै निराश भए, जति पिर परे पनि भूइँतहका माओवादी ‘वीर’हरू आज पनि आपसी सम्बन्धलाई कति पवित्र सम्झन्छन् भन्ने नै देखाएको छ ।
अर्को कुरा कुनै पूर्वमाओवादी छापामार बाध्यता वा चाहनाका कारण यौनकर्मी बन्यो भने त्यसमा यत्रो हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने कारण के? यो गीतको कथाले चाहना होइन, बाध्यताको चित्रण गरेको छ। तर, प्रचण्डका समर्थकहरूले यो दृश्य’bout फेसबुकका भित्तामा जे लेखेका छन्, त्यसबाट उनीहरूको चरम पुरुषसत्तावादी अहङ्कार नै प्रकट भएको छ । ‘वेश्यावृत्ति’ र ‘देहव्यापार’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर उनीहरूले यौनकर्मीहरूको अपमान गरेका छन्। त्यसो गर्ने प्रचण्डका अनुयायीहरूलाई हाम्रो युगकी प्रतिनिधि कवयित्रि निभा शाहले ‘म वेश्या’ शीर्षकको कवितामा लेखेका निम्न हरफहरू पढ्न अनुरोध गर्दछु-
शहीदको रगत चुस्ने
पवित्र र चोखा छन्
हो म वेश्याका ओठहरू ।
शहीदका छाती गिजोल्ने तिम्रा
मेरा छातीहरू ।
शहीदको यौनाङ्ग चुठ्ने
तिम्रा यौनाङ्ग भन्दा
हो, म वेश्याका यौनाङ्गहरू ।(अन्लाईन )